सेनापरिचालन विधेयकबारे सबैको फरक धारणा - Best Khabar
Best Khabar Team | २०७५ चैत्र १२ गते मंगलबार
२६ मार्च, २०१९
काठमाडौ ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्न सक्नेगरि सेना परिचालन विद्येयक ल्याउन लागेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक प्रोपागाण्डा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पाण्डेले कांग्रेसले ‘नन–ईस्यु’ उठाएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने,‘कांग्रेसले अहिले जे गरिरहेको छ, यो विल्कुलै राजनीतिक एजेण्डा होईन, राजनीतिक प्रोपोगाण्डामात्रै हो । कहिले गोविन्द केसीको कुरा उठाएको छ, कहिले के भनेको छ, अहिले आएर सेना परिचालनको नाममा कांग्रेसले नन–ईस्यु उठाएको छ । बास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो विद्येयक आजभन्दा २ वर्ष पहिले कांग्रेसकै पालामा ल्याईएको हो । तर, अहिले कांग्रेसले यसमा स्यालहुईँया देखायो ।’उनले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयकबारे कोही पनि द्धिविधामा पर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानलाई अवेज्ञा गरेर सरकारले कुनैपनि काम गर्दैन् । सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नै अघि बढ्छ । जनताको स्पिरिटअनुसार नै अघि बढ्छ । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’
काठमाडौंमा सोमबार गरिएको कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न लागे भनेर राजनीतिक खेती गर्न लागिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । उनले भने,‘कसैलेपनि ठूलो स्वरमा अनावश्यक कुरालाई प्रोभोक नगरौं । उक्त विद्येयकका बारेमा २ वर्ष पहिले यो कुरा किन आएन ? सुरक्षा परिषदबिना प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न मिल्दैन् ।’ उनले सेनालाई खल्तीको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘सेनालाई खल्तीको विषय बनाउनुहुँदैन् । सेनाको ईतिहास र गौरवमा हामी आँच आउन दिँदैनौं । यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्दछौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आफूहरुले उक्त विद्येयकलाई धेरै कुरा विचार गरेर रोकेको दाबी गरे । उनले भने,‘विषम परिस्थितिमा सेना परिचालन गर्ने भन्ने अनि सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ, यो गलत कुरा हो ।’ उनले सेना परिचालनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नै नगरेको जिकिर गरे । उनले भने,‘यस्तो विषयमा हामीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्दथ्यो ।’ उनले नेकपाका नेता सोम पाण्डेले भनेजस्तो सेना परिचालन विद्येयक २ वर्ष पहिले कांग्रेसको पालामा नै ल्याईएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको जिकिर गरे ।
उनले थपे,‘संघीय कानून नै बनेको छैन, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकार दिन खोजिएको छ । हामीलाई यो कुरा मान्य छैन्। विद्येयक संशोधन गर्नुपर्छ ।’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सेनाको नाममा राजनीतिक कसैले पनि गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘अहिले ल्याईएको सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयकमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु देखेको छु । अहिलेपनि म सेनाको पेन्सन खाइरहेको छु । बन्दुक, गोली, बारुद र युद्धकला भनेको यो राजनीति होईन । यो ब्यारेमा राम्रोसँग राखिनुपर्छ । अहिलेका रक्षामन्त्रीले ‘डबल–स्ट्याण्ड’ देखाईरहेका छन् । चिप्ला कुरा गरेर हुँदैन् ।’ बस्न्यातले ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएर आएको दिनदेखि नै सेनाको छबि गिर्दै गएको आरोप लगाए । उनले भने,‘रक्षामन्त्री भनेको त सेनाको पिता हो । तर, उहाँ रक्षामन्त्री भएपछि सेनाको छबि गिर्दै गएको छ । किनभने नेपाली सेनाले विम्स्टेकमा भाग लिएन भनेर दुनिया गाली गरियो, प्रधानमन्त्रीले गाली खाए, सेनाले गाली खायो, यी रक्षामन्त्रीले स्विकृति दिने चुईंक्क बोलेनन् । किन ?’
देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा देशको सबैभन्दा ठूलो चूनौति भारतीय नाकाबन्दी भनिएको उल्लेख गर्दै बस्न्यातले भने,‘यो रक्षामन्त्रीका मुखबाट उहाँले बनाएको सुरक्षा नीतिबाट आउने होईन, परराष्ट्रमन्त्रीले विनम्रताका साथ उहाँमार्फत यी चिजहरु आउनुपर्दथ्यो, तर कस्तो गल्ती भएको छ ।
के तपाईको नेपाली सेना के हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो रक्षामन्त्री के अब लड्नुहुन्छ त भारतसँग ? मेरो रक्षामन्त्री भनेको सेनाको पिता हो, अस्ति अमेरिकाको सहायक रक्षामन्त्री आएर चीनको विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि मेरो रक्षामन्त्रीको घाँटीमा के अड्किएको थियो ? त्यसको प्रतिवादमा मित्रराष्ट्र चीनको राजदुतले बेलुका विज्ञप्ती निकाल्नुपर्दा उहाँले किन बोल्नुभएन ? हामीले धेरै रक्षामन्त्रीहरु देख्यौं, धेरै देख्यौं रक्षासचिवहरु, धेरै देख्यौं प्रधानमन्त्रीहरु, तर सुरक्षा परिषदको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकल खल्तीबाट सर्लक्क सेना परिचालन गर्नसक्ने विद्येयक रक्षामन्त्रीले किन लैजाने ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
सुरक्षा परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरु सहभागी नहुने तर ती मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ त ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले थपे,‘सेना परिचालनसम्बन्धी सल्लाह दिने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हो त भन्दा प्रधानसेनापति हो, प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा अवस्था, कमिकमजोरी र सेनाको क्षमता के छ ? भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ, उहाँले दैनिक रुपमा देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भनेर मुल्यांकन गरिराख्नुभएको हुन्छ । तर, सेना परिचालनसम्बन्धी अहिले बनेको विद्येयकमा उहाँ सदस्य हुनुहुन्न । उहाँलाई सदस्यमा राखिएको छैन् । भनेपछि यो कस्तो किसिमको विद्येयक हो त ?’
२१ जुन, २०१९ वासिङ्टन । आगामी सन् २०२० मा...
२९ मार्च, २०२०लण्डन । संयुक्त राज्य बेलायतका विभिन्न शहरमा...